တစ်ဦးကား Chiang Rai ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Chiang Rai ကားတစ်စီးငှားရမ်း Chiang Rai
မော်တော်ကားငှားရမ်း Chiang Rai
တစ်ဦးကားကိုငှား Chiang Rai
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမြို့တော်, တိုင်းပြည်တပြင်လုံးကိုအများဆုံး scintillating သောအရပ်တို့ကိုမတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမြို့ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာနှစ်မျိုးလုံးခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုယုဂျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာနေရာချ, ထိုသို့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမတူကွဲပြားမှုဝါကြွားသောညှိနှိုင်းထားတာချင်းရိုင်ခရိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ မြို့တော်ရဲ့မြို့ပြက၎င်း၏ထားကြ၏-ပြန်သဘောသဘာဝမီးမောင်းထိုးပြ 200,000 ၏လူဦးရေရှိတယ်။ အထင်ရှားဆုံးဆွဲဆောင်မှု၏အချို့နဲ့အခြားခရီးစဉ်တို့တွင်အထိုကဲ့သို့သောအဖြူရောင်ဗိမာနျတျောအဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်များ '' Wat Rong Kuhn 'Wat Phra Kaew, ပြတိုက်နှင့်တောင်တက်ခရီးစဉ်များပါဝင်သည်။ ဒါဟာကောင်းသောတန်ဖိုးနေရာထိုင်ခင်းနှင့်အတူဒွန်တွဲနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဒေသခံအစားအစာတမြို့လုံးတစ်ဦးတနင်္ဂနွေ getaway.The မဲ Fah Luang-ချင်းရိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဦးတည်ရာဗဟို Chiangrai ထံမှရုံအောက်မှာ 8 မိုင်မှာထိုင်နှင့်အကောင်းတစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူချိတ်ဆက်စေသည် ကွန်ယက်ကို။ သို့သော်ကားကိုငှားရမ်းန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းသည်။ သူတို့ကသင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Hustle ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားကျော်လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူန်းကျင်ကားမောင်းပိုနှစ်သက်လျှင်သင်သည်ကံကောင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ကြ၏ city.And နှင့်အနီးတဝိုက်လွယ်ကူခြင်းနှင့်သက်သာခြင်းနှင့်ရွှေ့ဖို့အသုံးပြုသူများ, နှစ်ဦးစလုံးလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ဒေသခံကို enable ။ တစ်ဦးကားကလပ်ကုမ္ပဏီထိုင်းနိုင်ငံတလွှားအပေါငျးတို့သညျအခွားအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်မြို့များမှတိုးချဲ့ညှိနှိုင်းထားတာချင်းရိုင်မြို့၌ပရီမီယံကားတစ်စီးငှားရမ်းန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်ငှားရမ်း။ အဆိုပါကားကိုငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှုလူတိုင်းရဲ့ခရီးသွားလိုအပ်ချက်အဖြစ်အရသာကိုက်ညီနိုင်ဖြစ်ကြောင်းမော်တော်ယာဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပေးထားပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသည့်ချင်းရိုင်ခရိုင်ရှိဖြစ်ခြင်းအဓိကဆွဲဆောင်မှုအချို့နှင့်အတူကားငှားဖို့မျှမျှတတစျေးနှုန်းရွေးချယ်ခရီးစဉ်အတွက်ပါဝင်ပိုမိုအဆင်ပြေစေနိုင်သည်။
Chiangrai တစ်ဦးငှားရမ်းကားတစ်စီး booking
ငှားနေတဲ့ကားကလပ်နှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည် Chiangrai ငှားတဲ့ကားကလပ်ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘွတ်ကင်အပိုင်းထိပ်လက်ဝဲဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးစာရင်းထဲကသင့်ရဲ့ရွေး-up, တည်နေရာကို select အဖြစ်သင့်ရဲ့စတင် inputting နှင့်ရက်စွဲများပြန်လာသတိပေးခံရလိမ့်မည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်တော်တော်ဖြောင့်ရှေ့ကိုနှင့်ကိုလိုကျနာဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ဦးမြှင့်တင်ရေးကုဒ်ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်လည်း ပို. ပင်ဖော်ရွေအဆင့်ဆင့်ဖို့ပြီးသားစျေးပေါတဲ့ကားအငှားစျေးနှုန်းများလျှော့ချနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘွတ်ကင် စတင်. တွင်, သငျသညျအမြားဆုံးဦးစားပေးမည်ရွေးချယ်ဖို့ရာမှမော်တော်ယာဉ်များများ၏စာရင်းကိုနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
Chiangrai အတွက်တည်နေရာတက် Pick
· Chiangrai လေဆိပ်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဥပဒေပြု 21 နှစ်အသက်အုပ်ဖြစ်ရမည်အားလုံးကို drivers တွေကိုလိုအပ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသူတို့အောက်ပါတို့မှတစ်ခုစီကိုအပိုင်သေချာစေရန် clients များအားပေး;
အဆိုပါငှားကားတစ်စီး Chiangrai ကလပ်ဖောက်သည် prompt ကိုဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းအဖြစ်ယာဉ်အားလုံးကောင်းစွာဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမော်တော်ယာဉ်များဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ ကားတစ်စီးကလပ်သင် features အသစ်တွေလည်းပါဝင်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်ငှားရမ်းသောနောက်ထပ်အကြိုးခံစားခှငျ့;
အဆိုပါကုမ္ပဏီအပေါငျးတို့သတိုင်းပြည်အပေါ်အကိုင်းအခက်ရှိပါတယ်။ ဒီအမျိုးစုံရွေး-up, နေရာများတွင်အပေါ်အားကိုးအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအဓိကမြို့ကြီးများတွင်မဆိုငွေပေးငွေယူအပြီးသတ်ဖို့လွယ်ကူစေသည်။
အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေတတ်နိုင်သမျှ clients များအန္တိမလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူသွားလာရန်ခွင့်ပြုအဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။